သင်္ကြန်တွင်းမှာဖတ်မိတဲ့ ဟာသများ(၂) | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on April 21, 2011
လင်မယားနှစ်ယောက်လက်ထပ်တဲ့ 25 နှစ်မြောက်ငွေရတုနေ့မှာ ယောက်ျားလုပ်သူက မိန်းမကို ဒီလိုလေးပြောပြပါတယ်။
““တကယ်ဆိုရင် မင်းနဲ့ငါနဲ့ညားတာ မှားယွင်းတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တစ်ခုကြောင့်ပဲကွ””
““ဘာ… ဘယ်လို… ရှင်းစမ်းပါဦး””
““ဒီလိုလေ… အဲဒီနေ့က ငါလေချွန်တာ မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ တက္ကစီသမားကိုခေါ်တာကွ””
ကျွန်တော့်ဖေဖေခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာစီကုံးရေးခိုင်းရာ ကျောင်းသားလေးတစ်ဦးက ဤသို့ရေးထားသည်။
““ကျွန်တော်၏ဖေဖေသည် အာဂလူစွမ်းကောင်းယောက်ျားပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ပင်လယ်ကို ဖြတ်ကူးနိုင်သည်။
သဲကန္တာရကို ဖြတ်လျှောက်နိုင်သည်။ ကျားကိုရင်ဆိုင်သတ်ရဲသည်။ သူမလုပ်နိုင်တာမရှိပေ။ သို့သော်လည်း
လောလောဆယ်တွင် သူသည် ပန်းကန်ဆေးခြင်း၊ အမှိုက်သွန်ခြင်းကိုသာ မကြာခဏပြုလုပ်နေရပေသည်””
တရားရုံးမှာ သက်သေအမျိုးသမီးကို တရားသူကြီးက မေးတယ်။
““ကျွန်မအသက် ၃၀ ပြည့်ပါပြီ””။ အမျိုးသမီးက တိုးတိုးလေးဖြေပါတယ်။
““ကောင်းပြီ။ ဒါနဲ့ ဘယ်နှခုနှစ်က ၃၀ ပြည့်တာလဲ””
““မောင်ရေ… မြန်မြန်ထစမ်းပါ။ အိမ်ထဲသူခိုးဝင်နေတယ်ထင်တယ်။ တရှပ်ရှပ်အသံကြားနေရတယ်””
““ငါက ဘာလုပ်ရမှာတုန်း မိန်းမရ”” ယောက်ျားလုပ်သူက အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ပြန်ပြောတယ်။
““ရှင်ကလဲ… အနည်းဆုံး ခွေးကို နှိုးလိုက်မှပေါ့””
““မကောင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကို သားသုံးတတ်နေပါလား။ မာရ်နတ်၊ မိစ္ဆာ၊ ပြိတ္တာတဲ့။ မေမေစိတ်မကောင်းဘူးသားရယ်””
““မေမေ.. ဒီစကားလုံးတွေကို သားရှိတ်စပီးယားဆီကရခဲ့တာပါ””
““ဟင်… ဒါဆို သူနဲ့မကစားနဲ့တော့””
““အဒေါ့်ရဲ့သမက် ဘယ့်နှယ်လဲ။ လူတော်လေးမဟုတ်လား””
““တစ်ခုပဲဆိုးတယ်။ သူ ဖဲမကစားတတ်ဘူး””
““ဟာ… အဲဒါ ပိုကောင်းတာပေါ့””
““ ဘာကောင်းရမှာလဲ။ မကစားတတ်ဘဲ ၀င်ကစားတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့””
ပန်းချီဝေဖန်ရေးသမားတစ်ယောက်ပါ။ သူကအရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်လေ့ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ အရက်တော်တော်မူးနေရင်း ပန်းချီပြပွဲတစ်ခုကိုသွားတယ်။ ပြပွဲအ၀င်ဝက မှန်တစ်ချပ်ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ပါတယ်။
““ပန်းချီကားအမှတ်-၁။ အရက်သမားတစ်ဦး၏ဦးခေါင်းပုံ။ သရုပ်ပါလှသည်။ ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။
တရားသူကြီး။ ။ခင်ဗျားကို တရားခံက “ချီးဘရိန်း” လို့ပြောတာဟာ ရုတ်တရက်စိတ်ဆိုးတုန်း ပါးစပ်က လွှတ်ခနဲထွက်သွားတာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
တရားလို။ ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျ။ သူ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အကြာကြီးကြည့်ပြီးမှ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
““ခင်ဗျားသမီးကို ဒီကောင်နဲ့ပေးစားတာ မှားတယ်ထင်တယ်။ ဒီကောင်က ထောင်ငါးနှစ်ကျခဲ့တဲ့ကောင်ဗျ””
““ကြည့်စမ်း။ ဒီကောင် ကျွန်တော့်ကိုလိမ်တယ်။ စောစောကတော့ ထောင်သုံးနှစ်ပဲကျဖူးပါတယ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုအယုံသွင်းတယ်။ ခွေးမသား””
““ဖေဖေ…. ဖေဖေ့ကို ဖေဖေ့အမေက ရိုက်ဖူးလားဟင်””
““မရိုက်ဖူးပါဘူးသားရဲ့။ မင်းအမေကသာ ရိုက်တာပါ””
အလွန်သန့်ရှင်းတာကိုကြိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့အခန်းရှေ့တံခါးမှာ ဟောဒီလို စာတစ်စောင်ကိုကပ်ထားပါတယ်။
““ခြေထောက်ကိုသေချာသုတ်ပါ။ ခြေသုတ်ကော်ဇောသည် ဘေးအခန်းရှေ့မှာရှိသည်””
““ဟေ့… မမြ… ဘာဖြစ်လို့ နိုင်လွန်ခြေအိတ်ကို လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားရတာလဲ””
““အော်… ဒါလား။ အနားယူစခန်းမှာ တစိမ်းယောက်ျားတွေ ရိသဲ့သဲ့လုပ်ပြီး အတင်းမဟားဒယားလုပ်မယ်ကြံရင် ခြေအိတ်အထက်ပိုင်းကိုလုံးဝခွင့်မပြုနဲ့လို့
““ဟေ့… မောင်မြ… အကယ်လို့များ မင်းရဲ့ ညီမလေးက အိမ်သော့ကိုမျိုချလိုက်ပြီဆိုပါစို့။ မင်း ဘာလုပ်မလဲ””
““ဟင်.. ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ပြတင်းပေါက်ကို မရရအောင်ဖွင့်ပြီးဝင်မှာပေါ့””
ကပ္ပလီတစ်ယောက် သဲကန္တာရမှာ လမ်းမှားပြီး အစာပြတ်ရေပြတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရေလည်း အရမ်းငတ်နေတာပေ့ါ။ လျှောက်လာရင်း ရှေ့မှာ ရေတကောင်းတစ်ခုကို မြင်တာနဲ့
ရေရှိလိုရှိငြား ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ရေတကောင်းထဲက အာလာဒင်ထွက်လာတယ်။
ရေငတ်နေတဲ့ကပ္ပလီက ရှိသမျှအားလေးနဲ့ အသံကုန်အော်ပြောလိုကတယ်။
““သန့်စင်တဲ့ရေအေးတွေအများကြီး ငါ့ကိုဖြတ်သန်းသွားစေချင်တယ်။ ငါ့အသားဟာ အဖြူရောင် ဖြစ်သွားစေချင်တယ်။ ပြီးတော့…
မိန်းမတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ပစ္စည်းကို မြင်ရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်””
““ဖြစ်စေရပါမယ်”” လို့ အာလာဒင်ကပြောပြီးပျောက်သွားတယ်။
မကြာဘူး၊ ကပ္ပလီဟာ အများသုံးရေဆွဲအိမ်သာအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး အမျိုးသမီးသန့်စင်ခန်းထဲကိုရောက်သွားပါတယ်။
ယောက်ျားဆီကို ထောင်ဝင်စာလာတွေ့တဲ့ မိန်းမက ထောင်မှူးကြီးကိုသွားပြီး မေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်။
““ထောင်မှူးကြီးရှင့်… ကျွန်မရဲ့ယောက်ျားကို ဒီထက်သက်သာတဲ့အလုပ်ကလေးများ မပေးနိုင်ဘူးလားရှင်””
““စာအိတ်ပေါ် တံဆိပ်ကပ်ရတဲ့အလုပ်ထက် သက်သာတာ ဘာရှိမလဲဗျ””
““အဲဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညညကျရင် တခြားထောင်ကျတွေနဲ့အတူ မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းတူးရလို့ ပင်ပန်းတယ်ပြောလို့ပါရှင့်””
အိမ်တစ်အိမ်မီးလောင်တော့ အိမ်ရှင်က မီးသတ်ဌာနကို အမြန်ဖုန်းဆက်ပါတယ်။
““ဒီကို အမြန်လာပါ။ ကျွန်တော့်အိမ် မီးလောင်နေလို့ပါ””
““အိုကေ”” မီးသတ်ဌာနက ပြန်ပြောတယ်။
““ခင်ဗျားဆီကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလာရမလဲ””
““ဟင်… ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ကားအနီကြီးတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်လား””
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲတွင် အလစ်သုတ်သမားများအတွက် သတိပေးချက်ကပ်ထားသည်။
““ဆိုင်အလစ်သုတ်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရပါက အရိုက်အနှက်ခံရမည်။ အချုပ်အနှောင်ခံရမည်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမည်။
ထိုဒဏ်ကိုခံနိုင်သူများသည် ဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူခြင်းကို ဆက်လက်ခံရမည်””
လူတစ်ယောက် အရက်ဘားမှာ အရက်သောက်နေပါတယ်။ ခဏကြာတော့ တခြားအရက်သမားတစ်ယောက်က ဒယီးဒယိုင်နဲ့
““မင်းအမေကို..ငါ..xx ++ xx@@@!!””
ဆိုင်ထဲကလူအားလုံးက သတ်ပွဲဖြစ်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်လိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ထိုင်နေတဲ့လူက အဲဒီအရက်သမားကို လျစ်လျူရှုထားပါတယ်။
အဲဒီလူကလည်း ဒယီးဒယိုင်နဲ့ပဲ တစ်ဖက်ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။
ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ ပြန်ရောက်လာပြီး ထိုင်နေတဲ့သူကို လက်ညိုးထိုးပြီးထပ်ပြောပါတယ်။
““မင်းအမေကို ငါ.. xx ++ xx@@@!! ””
ထိုင်နေသူကလည်း မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေပြန်တယ်။ အရက်မူးသမားထပ်ထွက်သွားတယ်။
ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ ပြန်ရောက်လာတယ်။ အမူးလည်းလွန်နေပြီ။ ထပ်ဆဲတယ်။
““မင်းအမေကို ငါ…xx ++ xx@@@!! ””
နောက်ဆုံးတော့ ထိုင်နေတဲ့လူက နောက်လှည့်ပြီး တုန့်ပြန်လိုက်ရပါတော့တယ်။
““အိမ်ကိုပြန်ပါတော့ အဖေရာ… အဖေ တော်တော်မူးနေပြီ””
အရာရှိ။ ။ ရဲဘော်… မင်းမှာ အကြွေနှစ်ရာရှိလား။
ရဲဘော်။ ။ ရှိတာပေါ့သူငယ်ချင်း။
အရာရှိ။ ။ အရာရှိတစ်ယောက်ကို ဒီလိုမပြောရဘူးကွ။ ပြန်ပြင်ပြောစမ်း။ မင်းမှာငွေအကြွေနှစ်ရာရှိလား။
ရဲဘော်။ ။ ဟင့်အင်း။ မရှိပါဘူးဆရာ။
တစ်နေ့မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူမွေးထားတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ပျောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီကြောင်ကို သူမက ချစ်စနိုးနဲ့“အချစ်”လို့ခေါ်တယ်။
အပြင်မှာက တော်တော်မှောင်နေပါပြီ။ လမ်းပေါ်မှာ သူမရဲ့ကြောင်ရှိလိမ့်မယ်လို့တွေးပြီး အမျိူးသမီးက အနွေးထည်ဝတ်ပြီးအပြင်ထွက်ရှာပါတယ်။
ကင်းလှည့်လာတဲ့ရဲတစ်ယောက်က သူမကို မြင်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့အနားရောက်လာပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။
ရဲက သူမကို ပြည့်တန်ဆာထင်ပြီး ချက်ချင်းလက်ထိပ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။
““ခင်ဗျား လူလိမ်”” လို့ ရှေ့နေက ပြိုင်ဖက်ရှေ့နေကို အော်ပြောလိုက်တယ်။
““ခင်ဗျားက လူညာ”” လို့ ပြိုင်ဖက်ရှေ့နေကလည်း ပြန်အော်တာပေါ့။
တရားသူကြီးက စားပွဲကိုတူနဲ့ကျယ်ကျယ်လေးထုပြီး ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရှာတယ်။
““ကဲ… အခုဆိုရင် ရှေ့နေနှစ်ယောက်က မိမိတို့အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်းမှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးပြီမို့
အလုပ်လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို လူငယ်လေးတစ်ယောက် ဖြည့်နေပါတယ်။
““အကယ်၍ အဖမ်းအဆီးခံရပါက အဘယ်ကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသနည်း””လို့မေးထားတာပါ။
ကောင်လေးက မေးခွန်းကို ဒီလိုပြန်ဖြေပါတယ်။
စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ယောက်က လူနာတစ်ယောက်ကို စမ်းသပ်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်က ရုပ်ပုံစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး
ပထမဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထောင်ပြလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လူနာကို ဘာမြင်သလဲလို့မေးတယ်။ လူနာက —
““ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ပန်းခြံထဲမှာ ချစ်တင်းနှီးနှောနေကြတာပါ”” လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။
ဆရာဝန်က ဒုတိယဓာတ်ပုံကိုထောင်ပြပြီး ဘာမြင်သလဲလို့မေးတယ်။
““ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် လှေထဲမှာ ချစ်တင်းနှီးနှောနေကြတာပါ””
ဆရာဝန်က တတိယဓာတ်ပုံကိုထောင်ပြပါတယ်။ အဲလိုပဲပြန်ဖြေပါတယ်။
ကျန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲဆက်စစ်ဆေးကြည့်ပါတယ်။ လူနာက ပုံတိုင်းမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ချစ်တင်းနှီးနှော
နေကြပုံကို တွေ့တယ်လို့ ဖြေပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုပြီးဆုံးတဲ့အခါ မှတ်သားချက်တွေကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ဆရာဝန်က မှတ်ချက်ချတယ်။
““ခင်ဗျားဟာ လိင်စိတ်ကို အာရုံစွဲလန်းနေတဲ့လူပဲ””
““ဆရာကလည်း ညစ်ညမ်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူပါ””
← ခေတ်ပျက်ကြီးကို ၀ပ်ရှော့ပို့လိုက်ပြီ
“ခုချိန်ဆို နင်နေထိုင်တဲ့အရပ်ဆီမှာ နှင်းတွေကျနေတုန်းပဲလား” →